Home Wararka Farmaajo oo laba u kala jebiyay Guddiga Doorashada heer Federaal si uu...
Farmaajo oo laba u kala jebiyay Guddiga Doorashada heer Federaal si uu uga hortago…
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laba u kala jebiyay Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT. Guddoomiyaha Guddiga Cirro oo fulinaya amarka Villa Somalia ayaa maalintii shalay ahayd soo saaray habraaca Doorashada Golaha Shacabka kaasoo aan guddiga dhammaantiis aan isku raacsaneyn.
Qaar ka mid ah guddiga oo soo saaray warsaxaafadeed ayaa sheegay in Habraaca uu ku dhawaaqay Cirro aanu ahayn midkii lagu heshiiyay, waxayna sheegeen in ujeedka loo dedejiyay aay tahay in laga hordhaco shir lagu wado in dhammaadka usbuucan aay Muqdisho ku yeeshaan RW Rooble iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada, shirkaas oo lagu wado in wax looga bedelo Degaan Doorashada iyo tirada ergada ee lagu shaaciyay heshiiskii September 17 2020.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa waxa ka go’an in Doorashada Jubbaland ee beshiisa aay ka dhacdo magaalada Garbahaareey.
Shirka ayaa loo badinayaa in wax looga bedelo degaan doorashada xulista xubnaha Aqalka Hoose iyo ergada soo dooran doonta mudaneyaasha golaha shacabka.
Labadan qodob ayaa, haddii isbedelkan uusan imaan, waxay noqon karaa farqiga kaliya ee doorashadan kaga duwanaan doonto coddeyntii 2016-kii taasoo dalka ay ku hogaamisay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud.
Heshiiska 17-kii September wuxuu dhigayay in Xildhibaanada lagu soo xulo laba degaan doorasho ayna soo doortaan 101 ergo halka 2016-kii lagu soo doortay hal degaan doorasho ayna soo xuleen ergo dhan 51 xubnood.